सामाजिक मिडिया र खुशी | Martech Zone
सामाजिक मिडिया र खुशी
सोमबार, डिसेम्बर 8, 2008 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
गत वर्ष मैले एउटा पोष्ट लेखें के सोशल मिडियाले डिप्रेसन ठीक गर्न सक्छ?। यस्तो लाग्न सक्छ! आज म थिए खुसी जब राम्रो मित्र र इंडियानापोलिस मोबाइल मार्केटिंग गुरु आदम सानोले मलाई निम्न लिंक पठायो:
खुशी सामाजिक नेटवर्कमा संक्रामक हो। एउटा अंश:
नयाँ अनुसन्धानले देखाउँदछ कि सामाजिक नेटवर्कमा, एक अर्काबाट हटाइएका तीन डिग्रीसम्म व्यक्तिहरू बीच खुशी फैलिन्छ। यसको मतलब जब तपाई खुसी हुनुहुन्छ, एक साथीको साथीको साथीसँग पनि खुशीको थोरै सम्भावना हुन्छ।
उनीहरूले पत्ता लगाए कि जब कोही [धूम्रपान] छोडछन्, साथीको धूम्रपान छोड्ने सम्भावना percent 36 प्रतिशत थियो। यसबाहेक, एक अर्कालाई नचिन्ने व्यक्तिहरूको समूहले पनि यही समयमा धूम्रपान छोडिदियो, लेखकहरूले मेको न्यू इ England्ल्याण्ड जर्नल अफ मेडिसिन लेखमा भने।
सामाजिक सम्बन्धले मोटोपनालाई पनि असर गर्दछ। फाउलर र क्रिस्टिसले जुलाई २०० in मा न्यु इ England्ल्याण्ड जर्नल अफ मेडिसिनमा प्रकाशित एउटा कागजमा देखाए कि फोलर र क्रिटाकिसले एक निश्चित समय अवधिमा मोटोपना भएका साथीहरू भए मोटो हुने सम्भावना 57 2007 प्रतिशतले बढ्यो।
यो एक शक्तिशाली माध्यम हो जुन हामीले भर्खरै पत्ता लगाउन शुरू गर्यौं र मार्केटर्सको रूपमा लिभोर गर्न। यो प्रभावलाई महसुस गर्न महत्त्वपूर्ण छ किनकि तपाईंले आफ्नो अनलाइन रणनीतिहरू विकास गर्न जारी राख्नुहुन्छ। कसरी उपभोक्ताहरूले पहिले नै सोशल मिडिया मार्फत उनीहरूको व्यवहारलाई परिमार्जन गरिरहेका छन् भन्ने बारे थप पढ्नको लागि, म २०० highly को लागि अत्यधिक रजोर्फिसको उपभोक्ता बजार अनुभव रिपोर्ट सिफारिश गर्दछु।
त्यहाँ मन्दी किन छ?
तिमीलाई कसले ट्विटर गर्दैछ?
8 डिसेम्बर, 2008 बेलुका 10:41 बजे
नयाँ ग्रुपमा आफ्ना सबै खुशी बाँड्नुहोस् http://www.smallerindiana.com "उत्तेजक समाचार" भनिन्छ! http://www.smallerindiana.com/group/excitingnews
डिसे 9, 2008 मा 8: 11 AM
मलाई लाग्दैन कि अध्ययन माइस्पेस साथीहरूको बारेमा थियो, LOL। अध्ययनको उद्देश्यका लागि एउटा "सामाजिक सञ्जाल" मा मानिसहरूलाई चिन्ने मानिसहरूलाई चिन्ने व्यक्तिहरू समावेश गरिएको थियो, बार्बरा स्ट्रिस्यान्ड समावेश थिए।
अनलाइनमा हुने दयाको अनियमित कार्यहरूले पनि त्यस्तै प्रभाव पार्न सक्छ।
9 डिसेम्बर, 2008 बेलुका 1:26 बजे
अध्ययन कहाँ सहि छ र सामाजिक सञ्जालले मानिसहरूलाई कसरी खुसी बनाउन सक्छ भनी म देख्न सक्छु। अवश्य पनि यो प्रयोग गरिएको सानो नमूना मापन मा आधारित छ। तर यसले पनि प्रतिकूल असर पार्न सक्छ? केवल शैतानको वकालत खेल्दै, तर सामाजिक मिडियाले "साथीहरू" को भावना सिर्जना गर्न सक्छ जब वास्तविकतामा तिनीहरू छैनन्। मानिसहरूले तिनीहरूलाई धेरै गम्भीर रूपमा लिन सक्छन् र सेलर फ्लोरमा हिट गर्न सक्छन् जब उनीहरूले महसुस गर्छन् कि यी सम्बन्धहरू र जडानहरू कडा रूपमा अनलाइन छन्, र वास्तविक साँचो मित्रता होइन।